မျက်မှောက်ရေးရာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 434
ဒါရိုက်တာချိုတူးဇော်က အပိတ်ခံ “လွမ်းစိမ့်”ဇာတ်ကား အယ်လ်အေတွင် အခမဲ့ပြတော့မည် မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၂ ကချင်ပြည်တွင်စစ်ဘေး ဒုက္ခသည်များကူညီရေး နှိုးကြားမှုနှင့် အလှူဒါနပြုနိုင်ရေး ရည်ရွယ်ြ့ပီး ဧပြီ ၂၈၊ အယ်လ်အေရှိ အောင်ဇေခန်းမတွင် အယ်လ်အေသြဂနိုင်ဇာဖော်ဘားမားနှင့် မန္တလေးဂေဇက်အဖွဲ့တို့၏ ၀ို်င်းဝန်းကမကထပြုမှုဖြင့် ၀င်ကြေးအခမဲ့ ပြသမည်ဟု ကြော်ငြာလိုက်သည်ကို တွေ့ရသည်။ မိတ်ဆွေများ… အဆင်ပြေရင် လာခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ လွမ်းစိမ့်ဟာ… လွမ်းစိမ့်. . . ဆိုတာ. နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော် အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာ ပြားပြားဝပ်ဝပ် ဖိနှိပ်ခံထားရတဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ စာပေ ဂီတ ရုပ်ရှင်တွေထဲကနေ .. ရုန်းကြွတော်လှန်လာတဲ့ အနုပညာ ပစ္စည်းတခုပဲဗျ။ ဒါ ဗီဒီယို ကား သက်သက် မဟုတ်ဘူး။...
U Wiratu – မစုိုးရိမ်တိုက်သစ် နာယကဆရာတော် ဦးဝီရသူ၏ ရန်ကုန်မြို့ မတ်လ နောက်ဆုံးပတ် တရားဟောခရီးစဉ်
မစုိုးရိမ်တိုက်သစ် နာယကဆရာတော် ဦးဝီရသူ၏ ရန်ကုန်မြို့ မတ်လ နောက်ဆုံးပတ် တရားဟောခရီးစဉ် မိုးမခဓာတ်ပုံသတင်း၊ မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၂ ရန်ကုန်မြို့တော်မှ မှော်ဘီသို့ ပြောင်းရွှေ့သီတင်းသုံးနေသော ရွှေည၀ါဆရာတော်ကြီးကို သွားရောက် ဖူးမြော်ခဲ့စဉ်။ တောင်ဥက္ကလာမြို့၊ ငွေကြာရံ ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်၊ ပဓာန နာယကဆရာတော်ကြီး၊ ဘဒ္ဒန္တရေ၀တမထေရ် သက်တော် ၇၉ နှစ် အား ဖူးမြော်ကြည်ညိုစဉ်၊ ငွေကြာရံကျောင်းတိုက်မှ အကျဉ်းထောင်များက ပြန်လွတ်လာသော ရဟန်းတော်များနှင့် ငွေကြာရံဆရာတော်ကြီးတို့၏ ရင်ဖွင့်တရား၊ ရင်ဖွင့်စကား နာကြားနေစဉ်။ ၀ဲမှ ယာ – အရှင်နန္ဒ၊ ၂၈နှစ်၊ ၈ ၀ါ၊ ရွှေဝါရောင်၊ ပုသိမ်ထောင်။ အရှင်ဝိလာသဂ္ဂ၊ ၂၈ နှစ်၊ ၈ ၀ါ၊ ရွှေဝါရောင်၊ မုံရွာထောင်။ အရှင်ဇာနေယျ၊ ၄၈...
Dagon Taryar – မြစ်ဆုံစီမံကိန်း အလုံးစုံရပ်ဆိုင်းရန် ထပ်မံတောင်းဆို
သက်တော်ရှည် ပြည်သူ့စာရေးဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာက မြစ်ဆုံစီမံကိန်း အလုံးစုံရပ်ဆိုင်းရန် ထပ်မံတောင်းဆို မိုးမခဓာတ်ပုံသတင်း၊ မတ် ၃၀၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.
လေးဖြူက ကြံ့ဖွံ့ပါတီကို မဲမပေးခဲ့၊ Envoy ဂျာနယ်ကို ဥပဒေကြောင်းအရ ရင်ဆိုင်မည် မတ် ၃၀၊ ၂၀၁၂(လေးဖြူ၏ သူငယ်ချင်း ဒီဇိုင်းဆရာ မျိုးဆွေသန်း၏ Facebook တွင် ရေးသားထားချက်များကို ကူးယူ ဖော်ပြပါသည်။) လေးဖြူနဲ့ မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်က ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာ သီချင်းဆိုတဲ့ကိုလေးဖြူနဲ့ပတ်သက်လို့ သတင်းတစ်ခု တက်လာပါတယ်။ Envoy Journal က လေးဖြူနဲ့အင်တာဗျူးဆိုပြီး ၂၀၁၀ မှာ ကိုလေးဖြူက ကြံ့ဖွတ်ပါတီကို မဲပေးခဲ့ကြောင်း No tags for this post. Related posts No related posts.
May Sweet – စင်ကာပူတွင်ဖျော်ဖြေသွားသောမေဆွိ
စင်ကာပူတွင်ဖျော်ဖြေသွားသောမေဆွိ မိုးမခ အထောက်တော် (စင်ကာပူ) မတ်လ ၂၉၊ ၂၀၁၂ နာမည်ကျော် အဆိုတော် မေဆွိသည် ရွှေရတုမွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အလှူဒါနများနှင့် ဂီတပဒေသာပွဲများကို ရန်ကုန်မြို့တွင်ကျင်းပခဲ့ပြီး သူမနေထိုင်ရာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့အပြန် စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ လှည့်လည်ဝင်ရောက်စဉ် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၄ နှင့် ၂၅ ရက် ညများက စင်ကာပူရှိ သူမ၏ တေးချစ်သူ ပရိတ်သတ်များအား ရင်းနှီးစွာ တွေ့ဆုံ၍ သီဆိုဖျော်ဖြေသွားပါသည်။ ချယ်ရီမေ ကာရာအိုကေမြူးဇစ်ဘားတွင်ပြုလုပ်သော ဂီတညချမ်းတွင် မေဆွိက နှင်းဆီနက်တီးဝိုင်းနှင့်အတူ သူမ၏ခေတ်အဆက်ဆက်က ထင်ပေါ်ကျော်ကြားခဲ့သည့် တေးသီးချင်းဟောင်းများနှင့်အတူ စင်ကာပူတွင်နေထိုင်သည့် တေးသံရှင် မင်းအောင်ခိုင်၊ ပန်ကို၊ ထင်ကြီးတို့နှင့်အတူ စုံတွဲတေးများကိုလည်း သီဆိုဖျော်ဖြေသွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ No tags for this post....
Yangon Press International မတ်လ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မနန်းဝိုးဖန် မှာ သူ့ဖာသာသူ သတ်သေသွားခြင်း မဟုတ်ပဲ မတော်တဆဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်သည်ဟု စသုံးလုံးအရာရှိများက ခင်ပွန်းဖြစ်သူ အားပြောဆိုသော်လည်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုကြောင့် သတ်သေသွားသည်ဟု ယူဆကြောင်း ပြောဆိုသွားသည်။ ယင်းသို့ သေဆုံးသွားရသည့် အမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မနန်းဝိုးဖန်၏ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ မစ္စတာ နာမာဆဲ အား စသုံးလုံး မှ အရာရှိ ၂ ဦးက သတ်သေခြင်း မဟုတ်ကြောင်း မတော်တဆဖြစ်မှုသာဖြစ်သည်ဟု ၎င်း၏ ဟိုတယ်သို့ လာရောက်ကာ ယနေ့ နံနက်တွင် ပြောဆိုသွားသည်ဟု ပြောသည်။ No tags for this post. Related posts...
တူမောင်ညို မတ်လ ၂၈၊ ၂၀၁၂ “(၆၇) နှစ်မြောက် တပ်မတော်နေ့” မှာပြောတဲ့ ဗိုလ်မင်းအောင်အောင်လှိုင်ရဲ့မိန့်ခွန်းထဲက အောက်ပါအချက် ၂ ချက်ကို သတိပြုမိပါတယ်။ တပ်မတော်ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေတို့ကို တပ်မတော်ကို ခေတ်ကာလနဲ့အညီ တည်ဆောက် ပေးခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူများအဖြစ် တတန်းတည်းထားပြီး ရည်ညွန်းပြောကြားတဲ့အချက်နဲ့ လွှတ်တော်ထဲမှာ စစ်သားအမတ် ၂၅% ဘာကြောင့်ပါဝင်နေရသလဲဆိုတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ တပ်မတော်ဖခင်လို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုရည်ညွန်းသော်လည်း ယခင်က “အောင်ဆန်းစစ်ကြောင်း” ဆိုတာရှိခဲ့ပြီး (နဝတ-နအဖ) ခေတ် မှာ ဖြုတ်ပယ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုလည်းဖြုတ်ပယ်ထားဆဲပါ။ ထားပါတော့။ နောက်တချက်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နိုင်ငံရေးလုပ်တော့ စစ်တပ်ကနေပြတ်ပြတ်သားသားထွက်ပြီး နိုင်ငံရေးကို ခြေစုံပစ်ပြီးလုပ်ခဲ့သူဖြစ် တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ “ကိုအောင်ဆန်း- သခင်အောင်ဆန်း- ဗိုလ်အောင်ဆန်း- ဦးအောင်ဆန်း” စသဖြင့် ကျောင်းသား၊ နိုင်ငံရေး သမားဘဝကနေ...
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မနီလာသိန်း၏ဖခင်ဈာပန ကျင်းပ တာရာဝေယံ၊ ရန်ကုန်၊ မတ် ၂၈၊ ၂၀၁၂ ယမန်နေ့ မနက် ၁၂ နာရီက ၈၈ မျုိးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မနီလာသိန်းရဲ့ ဖခင် ဦးသိန်း (ခ) ကန့်စိန်ဘန် (အသက် ၈၁ နှစ်၊ မတ် ၂၅၊ ၂၀၁၂ မှာ ကွယ်လွန်) ရဲ့ ဈာပနကို ရေဝေးသုသန်မှာ မီးသဂြိုဟ်ပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။ ဈာပနကို ၈၈ မျုိးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မင်းကိုနိုင် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအင်အားစု အသီးသီးမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ဆွေမျိုးမိတ်သင်္ဂဟများ ၃၀၀ ခန့် လိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကွယ်လွန်သူကို ရည်စူးပြီး မတ် ၃၁၊ စနေနေ့ နံနက် ၇ နာရီ...
Page 434 of 448«1...432433434435436...448»
Zaw Aung (Mon Ywa) - Burma and World's Emperors